ရသအတွေး: Laptop တစ်လုံးရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်း
ဘယ်လို Laptop တစ်လုံးဝယ်ယူမလဲ ကျွန်တော်ရေးပြသောအကြောင်းအရာများသည် ကျွန်တော်လက်လှမ်း မှီသလောက်သာဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အကူတော့အနည်းငယ်ရမှာပါ။ ကျွန်တော် လေ့လာ ထားသမျှသာ သိစေလိုခြင်းငှာရေးသားရခြင်းပါ။
လက်တော့ပ်တစ်လုံး ဘယ်လိုဝယ်မလဲ ဒီလိုဝယ်ကြတာပေါ့.....
၁။ ဘာတံဆိပ်ကိုရွေးချယ်မလဲ ?
(၁) ဘာတံဆိပ်ကိုရွေးမလဲ မိမိသည်အကြမ်းပတမ်းသုံးမည်ဆိုပါက အောက်ပါတံဆိပ်များကိုရွေးဝယ်ပါ။ Dell ,Toshiba, Lenovo Thinkpad, IBM ထုတ်စတာတွေကိုရွေးဝယ်ပါ။ အလယ်အလတ်အဆင့်လောက် သုံးမည်ဆို ပါက Sony, Compaq, FuJisu, HP, Apple iMac စတဲ့တံဆိပ်များကိုသာရွေးဝယ်ပါ။ MSI,ASUS,Acer အလကားပေးတာတောင် မယူပါနဲ့ ။ အသစ်မှယူပါ။ အဟောင်းဆို လုံးဝမစဉ်းစားပါနဲ့။ ခပ်ဝေးဝေးသာရှောင်။ လက်ဆောင်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ပေးလည်းမမက်ပါနဲ့။ အားနည်းချက်တစ်မျိုး စီရှိပါတယ်။
၂။ ငွေရောဘယ်လောက်သုံးမည် သတ်မှတ်ထားပါလဲ ? $ 2000 အောက်သတ်မှတ်ထားပါက တရုတ်၊ မလေး၊ အင်ဒို စတဲ့နိုင်လုပ်တွေပဲရမှာပါ။ $ 2000 အထက်ဆိုရင်တော့ ဂျပန်ထုတ်၊ ဥရောပထုတ်တွေရမှာပါ။ ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်ကလာလဲဆိုပြီးပြောရောင်းတာရှားပါတယ်။ သူတို့အတွက် ဘယ်ဟာ ရောင်းရ ရောင်းရ အမြတ်အစွန်းကျန်ရင်ပြီးတာပဲလိုပဲသဘောထားတာ။ ကောင်းကောင်းသုံးချင် တယ်ဆိုရင်ဖြင့် $ 2000 အထက်သာစဉ်စားပါလေ။ ကျွန်တော်တောင် VAIO Z ၀ယ်ထားတယ်။
၃။ ဘာအတွက်သုံးမည်လဲ ? ဂိမ်းတွေဘာတွေဆော့မှာလား၊ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဂရပ်ဖစကဒ် ကောင်းကောင်း ပါတဲ့ အမျိုးအစားဝယ်သင့်ပါတယ်။ Lenovo Y series, Apple iMac, Fujisu, Dell အဲဒီ အမျိုးအစားတွေမှာ ပါတတ်ပါတယ်။ မိမိရွေးချယ်လိုက်သော အမျိုးအစားတိုင်းဟာ Onboard သာပါတတ်ပါတယ်။ Sony Series များမှာ ဂရပ်ဖစ်အားနည်းပါတယ်။ ဘက္ထရီသက်တမ်းနှင့် ဂရပ်ဖစ်ချိန်ယူရမှာပါ။ ခုဝယ်မယ်ဆိုရင် 1 GB လောက်မှလုံလောက်ပါမယ်။ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်။
၄။ ဘာတွေကြည့်ရမလဲ ? ဒါတွေကြည့်ပါ။
LCD ဒါမှမဟုတ် LED (Sony မှာ Screen ကောင်းပါတယ်)
(b) CPU Speed
Intel i3, i5, i7 (2.0 GHz ) ထက်ပိုသော
Northbridge / Sourthbridge , Bus Speed 1333 MHz ဒါမှမဟုတ် 1066 MHz
L2 Case 3,6
အနည်းဆုံး SATA 500 GB ( 7200 RPM )
1 GB ထက်မနည်း
DDR3( 800,1066 ) ပိုကောင်းပါတယ်။ DDR2ထက် 1.3 ဆပိုမြန်ပါတယ်။
SD, Mini SD Micro SD စတဲ့ကဒ်များဖတ်နိုင်သော Slot တစ်ခုပါသင့်ပါတယ်။
Screen အရွယ်အစားသေးငယ်ပါက (13.3 ) ၄ နာရီထက်မနည်းခံရပါမယ်။6cell ထက်ပိုသော
USB2ဒါမှမဟုတ် USB3အနည်းဆုံး ၃ ခုပါရပါမယ်။
(i) DVD or Blue Ray disc
(j) Windows764 bit ရှိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။
နောက်ဆက်တွဲ PCWorld ကဖော်ပြတဲ့ Top 10 လက်တော့ပ်တွေကတော့အောက်မှာ Scrool Bar ဆွဲကြည့်ပါ။
HP (Hewlett-Packard) Mini 110 Netbook - Customizable
See what's new in Office 2010! »
<a href=" http://ad.doubleclick.net/jump/pcw.main.trackingpixel/MicrosoftMIGBadgeTrackingv2;sz=1x1;ord=1291721823693?"><img src=" http://ad.doubleclick.net/ad/pcw.main.trackingpixel/MicrosoftMIGBadgeTrackingv2;sz=1x1;ord=1291721823693?" border="0" alt="" /></a>
Acer Aspire AS5742-7653 15.6" LED Notebook - Core i5 i5-540M 2.40 GHz - Black
Fujitsu LifeBook MH380 Netbook - Atom N450 1.66 GHz - 10.1" - Red
Acer Aspire AS5742-7120 Notebook
HP (Hewlett-Packard) TouchSmart tm2-2150us Tablet PC
HP (Hewlett-Packard) Business Notebook nc6400
Asus G73Jh-B1 Notebook
HP (Hewlett-Packard) Pavilion dm4-1160us Notebook
HP (Hewlett-Packard) Mini 110-3130nr Netbook
HP (Hewlett-Packard) G72-b60US Notebook
Posted by ရသအတွေး at 9:12 PM